Wararka Maanta: Khamiis, Mar 22, 2012-Isbadal dhinaca Nabad-galyada ah oo laga dareemayo Degmada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan
Isbadal dhinaca Nabad-galyada ah oo laga dareemayo Degmada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan Khamiis, Maarso 22, 2012 (HOL) — Dadka ku dhaqan magaalada Beledweyne oo Todobaadyo ka hor magan u ahaa qaraxyo is xig xigay iyo weeraro xiliyada habeenkii lagu soo qaado magaalada, waxaa ay hadda dareemayaan Isbadal dhinaca nabad-galyada ah, kadib markii ay ciidamada dowladda Itoobiya iyo kuwa maamulka gobollka Hiiraan oo iskaashanaya xooga saaraan sugida amaanka magaalada.
Labadii cisho ee la soo dhaafay ayaa la arkayay ciidamo ka kuwada tirsan kuwa dowladda Itoobiya iyo maamulka gobollka Hiiraan oo gaaf-wareegaya daafaha magaalada, islamarkaana u kuur-galaya dhaq-dhaqaaqyda ka jira deegaannada ku hareereysan Beledweyne, halka gudaha magaaladana lagu arkayo ciidamo gaar ah oo isha ku haya dhaq-dhaqaaqa dadka iyo gadiidka.
Subaxa hore marka uu waagu baryo 6:30, aroornimo waxaa ay idhahaagu qabanayaan ciidamada dowladda Itoobiya oo howlgalo miino baaris ah ka wada jidadka iyo waliba is-gooysada muhiim-ka ah ee magaalada, waxaana mudada uu howlgalkaasi socdo hakad la hakiyaa dhaq dhaqaaqa dadka iyo gadiidka.
Ciidamada maamulka gobollka ayaa dhinacooda siweyn u adkeynaya sugida nabad-galyada goobaha ay dadku badan yihiin, sida labada Buundo ee isku xirta qeybaha kala duwan ee magaalada, iyaga oo baaritaanno joogta ah ku haya gadiidka isaga kala goosha.
Saraakiisha maamulka gobollka oo aan wax ka weydiinay howlgalada socda ayaa inoo sheegay in qorshuhu yahay ka foogjignaanta qaraxyo iyo weeraro danbe oo ka dhaca magaalada, iyaga oo dhinaca kalana sheegay in looga baahan yahay shacab-ka wada shaqeyn buuxda oo la yeeshaan ciidamada.
Dhinaca kale; ciidamada dowladda Itoobiya ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaa ay soo gaabiyeen saacadihii badnaa ee xiliga hore magaalada Bandowga galin jirtay, iyaga oo hadda bilaabay in ay waqti hore furaan isku socodka magaalada.
Weeraro is xig xigay oo todobaadyadii aynu soo dhaafnay ka dhacay qeybo kala gadisan oo ka tirsan magaalada ayaa sababay dhimashada iyo dhaawaca dad rayid ah iyo a ciidamada ka tirsan kuwa maamulka gobollka.
Dadka ku dhaqan magaalada Beledweyne ayaa soo dhaweeyay howlgalada lagu sugayo amaanka ee ka socda magaalada iyo waliba dabcinta bandowga waqtiga dheer qaaday jiray xiliyada, waxaana ay kuu sheegayaan dadka in waxa kaliya oo ay u baahan yihiin tahay nabad ay howlahooda shaqo ku gutaan.
Khamiis, Maarso 22, 2012 (HOL) — Dagaal u dhexeeyay ciidammo kawada tirsan degmada KMG ah oo maanta ka dhacay degmgada Wadajir ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaartay askartii u dagaalku u dhexeeyay. Ciidamada Dowladda KMG ah iyo kuwa Itoobiya oo dagaal la'aan ku qabsaday degmada Xudur ee Gobolka Bakool 3/22/2012 7:24 AM EST